Ma dherge dhurwaa (in box) r2 by JPKusmin - issuu
Ma dherge Dhurwaa Dhirbaaxada dhabanka Dhurwaa ku taal Tiro buuxda!
Taxanaha ARDAA Soomaalida ayaa lagu tilmaamaa dad maansada iyo sheekooyinka ku caan ah. Dhaqan ahaan qoyska ayaa markuu soo dhammaysto hawl-maalmeedkiisa waxay waalidka iyo dhallaankuba soo wada fadhiistaan ardaaga guriga, halkaasoo laga weriyo sheeko hiddoodda Soomaalidu ku caanka tahay. Sheekooyinkaas ayaa waxay bulshada ka taageeraan dhanka wacyigelinta, kor u qaadista garaadka, barashada afka iyo dhaqanka, ka tilmaan qaadashada iyo weliba madaddaalada. Buuggan wuxuu ka mid yahay taxanaha ARDAA oo ay sheekooyin kala geddisan ku soo gudbinayaan qoraayo badan. Tebin iyo farshaxan soo jiidasho leh oo u qalma tayada sheeko hiddoodda Soomaaliyeed ayaa ku kulmay ARDAA. Ujeeddada ARDAA waa in la helo taxane akhris oo kobcinayana akhriska, qoridda iyo fahamka afeed. © Xuquuqda qoraalka iyo sawirrada buuggan oo dhan waxay u dhawran tahay Saynab A J Daahir. Buuggan oo dhan ama qaybo ka mid ah lama daabacan karo, lama duuban karo, lama guurin karo, lama tarjuman karo, sina dib looguma soo saari karo iyadoon qoraaga laga haysan oggolaansho qoraal ah. Daabacaaddii u horeysay London 2017 © Zainab A J Dahir 2009 ISBN978-0-9570269-5-7
Buuggan waxaan u hibeeyey ardaydayda;
Khaali d , Ayaan, Cabdi r axmaan, Maxamuud, Xamse i yo Saabi r .
Sheekoy sheeko, sheeko xari i r ah shi l i n baa dhuustay gofanaa sheegay sheela a macawi s
Beri baa waxaa isu yimi afar Dhurwaa. Beryahaa iyo beryahaa ismay aragoo way is warraysteen. Mid baa mid kale weydiiyey ‘Waar bal ii warran, oo waayahaagu waa sidee?’
Mid baa yidhi. ‘Waar waxba kuma nooliyoo waan liitaa. Wax aan dheerayn badnaaba, haatan lugahayga dhaqaaqba kuma jiro’. ‘Sidaasooy tahay, waa Illaahay mahaddiiye, dhal gammaan orodkaan kaga dhergaa!’.
‘Anna waxaad arag igu ogaydeen haatan indho ma jiraan oo araggii baan u liitaa’. ‘Haddana alxamduli Laah, habeen mugdi ah, cirkoo da’aya, tog biyo marayaan irbadda ku dhacdaan arkaa’ ayuu ku labaad cawday.
Kii saddexaad ayaa hadalkii la wareegoo yidhi ‘way oo way, ma in aan ilko kuu hayaad mooddeen? Wax alla wixii aan hilbaha iyo lafaha jajabsan jiray maanta ilko layguma oga’. ‘Misana Eebbe mahaddiise, kuraankurta dameeraha waxaan idhaahdaa, ma cad baa, ma carjow baa, malaha waaba kelli!’
Dhurwaagii afaraad baa warrankii la wareegoo yidhi ‘waagii hore waataydun ogaydeen oo meel dheer baan wax ka maqli jiray, immikase maqal ma jiro. Dhegihii way i awdmeenoo waa dem ’. ‘Sidaas ooy tahay, Eebbe mahadi ha ka gaadhee toddoba tog oo biyo maraan, ka u shisheeya sagaarada fadhida raamsigeedaan maqlaa goortay qarjam qarjam leedahay. Maqalba halkaas ayaan ka joogaa!’
Beri baa habardugaag oo dhan hal wada qasheen, markaasaa Libaax amray Dhurwaa ‘waar Dhurwaayow, kaalay hilbaha inoo qaybi’. Dhurwaa baa si kalsooni leh u yidhi ‘Hasha ma badh mise badh? Badh Libaax baa leh, badhka kalana habardugaagga kalow ku heshiiya!’.
‘Wuxu qayb xumaa!’ ayuu Libaax mashiiqsaday. Intuu dhirbaaxo mug leh bab Dhurwaa kaga siiyey, ayuu il kaga soo tuuray. Dhurwaa oo xanuun la il daran ayaa dhan u luuday.
Libaax oo weli aad u cadhaysan ayaa u jeestay habardugaaggii kale, markaasuu Dacawo u yeedhay, ‘Naayaa Dayo, Dhurwaa qaybtii garan waaye adigu hilbaha qaybi’ ayuu amray. Dacawoo naxdin gariiraysa ayaa qaybintii bilowday; ‘hilbaha ma badh mise badh, badh Boqorow adaa leh...‘ Intay kor u jalleecday Libaax ayay qaybintii hilbaha ku sii dhiirratay, ooy sii wadday ...
... ‘badhka hadhayna ma waax mise waax, waax Libaaxow adaa leh...’ ... ‘waaxda kalana ma falladh mise falladh, falladh Boqorow adaa leh...’
Dugaaggii duurka joogay oo dhan ayaa iyagoo yaabban daawanaya sida ay Dayo wax u qaybinayso.
Dayaa sii wadday qaybintii ... ‘falladhka soo hadhayna ma rimic mise rimic, rimic Libaaxow adaa leh ... ... rimica soo hadhayna ma miil mise miil, miil adaa leh Boqorow’ ...
... ‘miilka soo hadhayna habardugaagga kalow isku fuulfuula!’ ayay Dayo go’aamisay.
Libaax intuu aad u qoslay ayuu yidhi ‘Dayooy yaa qayb wanaagga ku baray?’ ‘Dhirbaaxada dhaban Dhurwaa ku taal ayaa i bartay!’ ayaa jawaab laga hayaa Dayo Dacawo.
Gabayaa Cabdi Iidaan Faarax wuxuu tiriyey ... Dugaag baa ku shiray meel Daawana way lahaayeen Hal dubaaxa buu helay Waraabii dedaalkiyo Duqa weyn isaga buri Darribtii u wada dhigay Waa kii Dawrigii Aar Ku dellaley dharbaaxada Inuu dilase ma ahayn Wuxuu yidhi Dayooy hee Adna Dogob qaroomee Isku wada darsay tidhi Wuxuu yidhi Dayooy yaa Daacadnimada kuu dhigay Dacawadii waxay tidhi Isha Cali ninkii dayey Digniin wawgu filan tahay. [raadraac: warsidaha Hal-Aqoon, 2010]
Maalin baa sagaal dhal waraabe ah ugaadhsi tageen. Iyagoo wada socda ayaa ina Libaax ka hor yimi wuxuuna ka codsaday in uu raaco. Heshiin maysaan bay is yidhaahdeenoo way iska diideen. Ina Libaax baa aad u baryay 'maahee aan idin raaco' iyo 'keli baan ahee aan idinla socod wadaago' ayuu ku calool laxawsaday. Iyagoon ku qanacsanayn libaaxaa la jiraya, ayay misana ka yeeleen cabashadiisii, halkiina iska raaceen.
Muddo yar hadday socdeen waxay ku soo baxeen sagaal halaad iyo awr yar. Nasiib wacanaa! Waa kuwa eryaday ee xoolihii soo ritay! Haatan in la qaybiyo ayuun baa hadhay.
Ina Libaaxii waa ka in uu xoolaha qaybiyo isu soo sharraxay ee isagoo isu bogaya yidhi ‘Sagaalka halaad waa meel, awrkuna waa meel. Aniga iyo sagaalka halaad toban na dheh. Idinka iyo awrkuna toban baad tihiin’. ‘Sidaas ayay toban iyo toban tiro buuxda ku tahay!’
Dhal waraabe badhkood qaybintii way u cuntami weyday. Talaa ku caddaatay. Qaybtu ma hagaagsanee maxaa ka si ah? Mid ka mid ah ayaa yidhi ‘yeelay oo waan ku qanacsanahay qaybinta ina Libaax’. Mid kalaa diiday ‘waar ina Libaax buro dheeraad ah ayuu isa siiyay’. Ku saddexaad baa ku raacay oo weydiiyay ‘wallee waa runtaa, maxaase aynu ka yeeli karnaa?’
In ay u tagaan aabbahood, Oday Waraabe, oo ay u sheegaan arrintu siday tahay ayay isku raaceen. ‘Aabbaa waayo arag ahoo inala talin doona’ ayay is yidhaahdeen. Oday Waraabe waa ka hor kacay dhashiisii isagoo leh ‘waa la idin dhacaye ina mariya u tagno Aar Libaax’.
‘Boqorow’ ‘Hee’ ‘Qaybintii xoolaha ee wiilkaagii’ ‘Hee’ ‘Sidaa kumay habboonayn’
‘Een, een ... waxaan u jeedaa’ ayuu Oday Waraabe gariiray....
Ilayn carruuri waa carruur, awrkanna ina Libaax baa lehâ&#x20AC;&#x2122; ayuu Oday Waraabe degdeg u raaciyay hadalkiisii.
Hunguri weyne ina Libaax sidaas ayuu xoolihii oo dhan ku helay. Dhashii Oday Waraabana af kala qaad iyo xoolo laâ&#x20AC;&#x2122;aan ayaa ku dhacday.
Qeexidda ereyo ku jira sheekada kowaad: Ma dherge Dhurwaa SHILIN
xasharaad noocyo badan leh, oo dhiigga nuuga, oo aan baalal lahayn oo dadka iyo nafleyda kalaba cuna, cudurrana keena.
nooc shilinta ka mid ah, dulin sida shilinta nafleyda dhiigga ka jaqa oogadiisuna khafiif tahay markuu dhiigga ka dhergana qarxa.
waraabe, bahal dugaag ah oo xoolaha dila, ilko adag oo lafaha burburiya leh, labada lugood ee dambana u gaaban.
hadda tan la joogo, imika.
magac guud oo ay wadaagaan qooblayda oo dhan sida fardaha, baqlaha, dameeraha iyo farowga.
meel godan oo biyo mareen ah.
laf wareegsan oo cagta dusheeda ku taal.
cad yar oo aan hilib iyo laf midna ahayn, jiidhka iyo lafahana isku haysa.
Qeexidda ereyo ku jira sheekada labaad: Dhirbaaxada dhaban Dhurwaa ku taal HABARDUGAAG
bahalaha hilib cunka ah oo dhan.
neef geel ah oo dheddig.
muujinaya yasid (iska weynaysiin).
hadba lug qaadaya, itaal darro awgeed.
dhinac dhinac u eegtay.
KU SII DHIIRRATAY cabsi laâ&#x20AC;&#x203A;aan ku sii wadday. BADH
1/2, laba qaybood qayb ahaan.
1/4, afar qaybood qayb ahaan.
1/8, siddeed meelood, meel ahaan.
1/16, lix iyo toban meelood meel ahaan.
1/32, laba iyo soddon meelood meel ahaan.
xaajadii laga doodayay go‛aan (xalkiisa) ku gaadhay.
Qeexidda ereyo ku jira sheekada saddexaad: Tiro buuxda! UGAADHSI
nafley duurjoogto ah oo hilibkeeda la cuno sida biciidka oo la raadsado.
(aan idin) la socdo.
calaacalkiisa, ereyadiisa calaacal.
neef geel ah oo lab.
cayrsaday, ka daba orday.
ISU SOO SHARRAXAY
jago sare isla doonaya.
may jeclaysan, way qaadan kari waayeen.
TALAA KU CADDAATAY taladii wax ay ka yeelaan bay garan laâ&#x20AC;&#x203A; yihiin. WAAN YEELAY
waan ku raacay.
raalli baan ka ahay.
BURO DHEERAAD AH
sed ama wax (xoolo) dheeraad ah.
WAAYO ARAG AH
leh aqoon ama khibrad dheeraad ah.
Ma dherge dhurwaa (in box) r2